Liiska Magacyada Golaha Wasiirada cusub ee Afghanistan ee Daalibaan ku dhawaaqi doonto (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Liiska Magacyada Golaha Wasiirada cusub ee Afghanistan ee Daalibaan ku dhawaaqi doonto (Akhriso)
Dhaqdhaqaaqa Daalibaan ayaa ku jira diyaargaroowgii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqista Golaha Wasiirrada ee cusub xukuumadda ay ka dhisayaan oo la filayo inay dalka Afghanistan, iyadoo la sheegay inay ka mid noqon donaan dhammaan xubnooda hoggaaminta.
Madaxa ugu sarreeya Taalibaan Hibatullah Akhundzada la sheegay inuu hoggaamiyaha ugu sareeya maamulka noqonayo, balse aanu maamulka shaqo ku yeelan doonin, halka uu xukuumadda hoggaamin doono Madaxa Siyaasadda ee Daalibaan C/qani Baradar.
Waxaa magaalada Qandahar ee xarunta Xarakada ka socda wadatashiyo ay leeyihiin madaxda Sare ee kooxda Daalibaan oo oo hoggaaminayo Amiirkood, ayna qeyb ka yihiinku-xigeennadiisa Sirajuddin Xaqqani, oo ah madaxa shabakadda Haqqani, iyo Mullah Mohammad Yacquub oo ah wiilka uu dhalay aasaasihii Taalibaan Mullah Maxamed Cumar, ahna madaxa Guddiga militariga Taalibaan.
“Hoggaanka Taalibaan wuxuu hadda kala tashanayaa qowmiyado kala duwan, xisbiyo siyaasadeed iyo gudaha Imaarada Islaamiga sidii loo dhisi lahaa dowlad ay tahay in laga aqbalo, lagana aqoonsado gudaha iyo dibedda Afghanistan” ayuu Sher Mohammad Abbas Stanikzai, oo ah hoggaamiye kale oo Taliban ah ku yiri khudbad telefishanka laga sii daayay Sabtidii.
Liiska xubnaha hoggaamiya Taalibaan, oo la filayo in lagu daro Golaha Wasiirrada cusub ee Afghanistan waxaa ka mid ah;
Mullah Abdul Ghani Baradar, oo ah madaxa xafiiska siyaasadda ee caasimadda Qatar ee Doha
Sheikh Abdul Hakeem, madaxa wada xaajoodka Taliban ee Doha
Sher Abbas Stanekzai, ku xigeenka kooxda wada xaajoodka ee Doha
Sadar Ibrahim, oo ahaa taliyihii hore ee guddiga militariga
Abdul Qayyum Zakir, taliyihii hore ee guddiga militariga
Mullah Fazil, wasiir ku xigeenkii hore ee gaashaandhigga
Abdul Manan Akhund, oo la dhashay aasaasaha Taalibaan Mullah Omar
Maulvi Noor Muhammad Saqib, madaxii hore ee cadaalada Taalibaan
Amir Khan Muttaqi, wasiirkii hore ee warfaafinta
Abdul Salam Xanafi, oo xubin ka ah kooxda wadaxaajoodka Taaliban ee Doha
Qari Deen Muhammad, oo xubin ka ah kooxda wadaxaajoodka Taliban ee Doha
Lateef Mansoor, oo xubin ka ah kooxda wadahadalka Taliban ee Doha
Sheekh Qaasim, oo ka tirsan kooxda wada xaajoodka Taliban ee Doha
Muhammad Zahid Ahmadzai, diblumaasi hore oo Taalibaan oo joogi jiray Pakistan
Maulvi Abdul Kabeer, guddoomiyihii hore ee gobolka Nangarhar
Sheikh Abdul Hakim Sharee, oo ah wadaad saamayn badan leh
Noorulah Noori, maxbuuskii hore ugu xirnaa jiray xabsiga Guantanamo Bay
Taliban New Cabinet
Previous articleMidowga Musharixiinta oo weli ku dhegan Maxamed Farmaajo, Eedeyn cusubna u jeediyey
Next articleC/samad Ibraahim: Sawir-Qaadihii Daacish-ta Soomaaliya oo Xukun Xabsi ah lagu riday